Ukutshintsha kweNdawo yokuThengiswa kweMveli kunye neDijithali kutshintsha njani ukuba sizithenga njani izinto | Martech Zone
Umzi mveliso wentengiso unxibelelene ngokunzulu nokuziphatha kwabantu, iinkqubo, kunye nonxibelelwano oluthi lubonise ukulandela inguqu yedijithali esiye sayifumana kule minyaka ingamashumi amabini anesihlanu idlulileyo. Ukuzigcina sithatha inxaxheba, imibutho iluphendulile olu tshintsho ngokwenza iindlela zokunxibelelana zosasazo lwedijithali kunye noluntu lube yinto ebalulekileyo kwizicwangciso zabo zorhwebo, kodwa kubonakala ngathi amajelo emveli alahliwe.
Iindlela zokuthengisa zesintu ezinje ngeebhodi, amaphephandaba, iimagazini, itv, unomathotholo, okanye iiflaya ecaleni kwazo ukuthengiswa kwedatha kunye nemikhankaso yemithombo yeendaba zentlalo esebenza ngesandla ibenegalelo ekwakheni ngcono ulwazi malunga nophawu, intsingiselo, ukuthembeka, kwaye ekugqibeleni ukuba nefuthe kubathengi kuwo onke amabakala enkqubo yesigqibo sabo.
Itshintsha njani indlela esithenga ngayo izinto? Masidlule kuyo ngoku.
Namhlanje, indawo enkulu yobomi bethu yenzeka kwindawo yedijithali. Amanani acacile:
Ngomhla wokugqibela we-2020, zazikhona I-4.9 yezigidigidi zabasebenzisi be-intanethi kunye ne-4.2 yezigidigidi zeakhawunti esebenzayo kuthungelwano lweendaba zosasazo kwihlabathi liphela.
Isikhokelo sokuqala seSiza
Njengoko intengiso ye-Intanethi iphuhlisiwe, ngokunjalo nezicwangciso zentengiso zeenkampani. Uguquko lwedijithali lwenze ukuba iimveliso zenzeke ngokukhawuleza nangakumbi ngokuthe ngqo kubathengi, kunye nakwindlela yokungenisa ngokuthelekisa iimveliso kunye namaxabiso, jonga iingcebiso, ulandele abenzi bezimvo kunye nezinto zokuthenga.
Indlela esithenga ngayo ityhola ukuqheleka kokusetyenziswa kwe-intanethi kunye nokuthambeka kwezixhobo eziphethwe ngesandla, njengokunxibelelana norhwebo lwentlalo, ukwenza izigqibo, kunye nokuthenga kulula kunakuqala.
Intengiso eNtsha, ukuThengisa okutsha?
Ewe makhe icace.
Iindlela ezifanelekileyo zokuthengisa, ezesintu nezedijithali, zicebisa ukuba zichonge iimfuno zoluntu, zenze iminikelo ekhethekileyo ebonelela ezo mfuno, kwaye zinxibelelane ngokufanelekileyo namalungu abo ukonyusa ukoneliseka. Nangona ubukho boluntu kwi-Intanethi bungenakuphikwa, i-digital ayisiyiyo yonke into kunye nokuphela kwayo yonke intengiso.
Ukuba awundikholelwa, thatha Iprojekthi yePepsi Refresh njengomzekelo. Ngo-2010, uPepsi-Cola uthathe isigqibo sokushiya intengiso yesiqhelo (okt iintengiso zikamabonakude zonyaka zeSuper Bowl) ukuze asungule umkhankaso omkhulu wedijithali, ukuzama ukwakha ulwazi nokwakha ubudlelwane bexesha elide nabathengi. U-Pepsi wabhengeza ukuba bazonika i-20 yezigidi zeedola kwimibutho nakubantu ababenemibono yokwenza umhlaba ube yindawo engcono, bekhetha eyona ilungileyo yokuvota esidlangalaleni.
Ngokubhekisele kuthethathethwano, injongo yabo yayiyeyokubetha! Ngaphezulu kwezigidi ezingama-80 zeevoti ezibhalisiweyo, Iphepha likaFacsi likaPepsi ifumene phantse i-3.5 yezigidi ukuthandwa, yaye Iakhawunti ka-Pepsi ka-Twitter yamkelwe ngaphezulu kwama-60,000 abalandeli, kodwa ngaba unokuthelekelela ukuba kwenzeka ntoni kwintengiso?
Uphawu lwalahleka malunga nesiqingatha sezigidigidi zeerandi kwingeniso, yehla kwindawo yayo yemveli njengenani lesibini leziselo ezinxilisayo eMelika ukuya kwindawo yesithathu, ngasemva kweDiet Coke.
Kule meko ithile, imithombo yeendaba zentlalo iyodwa yenza ukuba uPepsi akwazi ukunxibelelana nabathengi, ukuphucula ulwazi, ukuphembelela izimvo zabathengi, ukufumana ingxelo, kodwa ayonyusanga ukuthengisa okunyanzele inkampani ukuba yamkele, kwakhona, isicwangciso-qhinga semigangatho emininzi ebandakanya isiko Iindlela zokuthengisa. Kutheni oko?
Idijithali kunye nesandla sendabuko ngesandla
Imidiya yemveli ayophuki. Into ekufuneka ilungisiwe lutshintsho lwengqondo lokuba yeyiphi imithombo yeendaba yemveli esetyenziswayo nokuba yeyiphi indima namhlanje.
UCharlie DeNatale, Ngaphezulu kwesicwangcisi seFold's Media Strategist
Ndiyicinga ukuba oku akunakuba yinyani, ngaphandle koko, kutheni singabona uMcDonald ngaphandle?
Nangona siyibiza ngokuba yeyesiko, ukuthengisa okuqhelekileyo kwavela ngokucacileyo ukusukela kwiminyaka yobudala begolide kanomathotholo kunye namaphephandaba, ngoku sithatha indima eyahlukileyo. Kuyanceda ukujolisa kumalungu ahlukeneyo osapho, ukufikelela kubaphulaphuli abathile ngokusebenzisa iimagazini ezikhethekileyo, iinkqubo zikamabonakude, kunye namaphephandaba, inegalelo ekudaleni ubungqongqo, ukuthembeka, kunye nolwazi lwentengiso, kunye nokwakha imeko ethandekayo ejikeleze kakuhle.
Njengoko idigital ibonakalisa ukuba kubalulekile ukuba iimveliso zihambelane nemarike eguqukayo, isiko linokuba sisixhobo sokulwa nokunciphisa ixesha lokunikwa ingqalelo kwabantu, lenza ukuba umntu asebenze ngakumbi, njengoko iikhathalogu zenyanga zingumzekelo. Ngelixa abanye banokufuna impembelelo yokuchonga ukuthengwa kwabo, abanye banokuthi ukuthembeka okuthe kratya kwinqaku lephephandaba.
Xa usebenza ngokubambisana, iindlela zentengiso yedijithali kunye neyesintu zihlanganisa omabini amacala abathengi, ukufikelela kubathengi abanokubakho kunokubangela ukuthengiselana okufanayo nokuzimeleyo kwengeniso eyandisiweyo. Ukuphonononga enye kunye nokunye kwandisa ithuba lokugcina abaphulaphuli ngaphakathi kwebhola yempembelelo kunye nefuthe elifanelekileyo kuhambo lwesigqibo somthengi.
Ubukho bedijithali kunye noluntu kunye nezixhobo ezishukumayo ziyila ngendlela esithenga ngayo, ukutyhala ubuntu ekuthengeni nge-Intanethi, kodwa impendulo kolo tshintsho sisicwangciso-qhinga sokuthengisa esineendlela ezininzi, kubandakanya nabalamli bendabuko abaphembelela yonke inkqubo yokufumana. Ukunxibelelana ngeendlela ezahlukeneyo, iinkampani ziqinisekisa ngobunzima bokubaleka iqamza lempembelelo enokuthi ivelise ifuthe kulo naliphi na inqanaba lohambo lomthengi ukusuka ekuvuseleleni umnqweno ukuya kuthengiso lwasemva.
tags: ngentla kwesibayaUCharlie denataleukuthengiswa kwedathapepsiIprojekthi yokuhlaziya ipepsiSocial Media Marketingukuthengisa ngokwesiko
Ndiyilungiselele njani iMifanekiso yam eChongiweyo kumaJelo eeNtlalo kunye noKonyusa ukugcwala kwabantu nge-30.9%